Iingcamango Zepasika | May 2022
Izipho ezi-21 eziPhambili zePasika zaBantu abaDala ngo-2021
Kukho iitoni zezipho zePasika ezikhulileyo phaya, ezivela kwi-chic, ukuhonjiswa okuphefumlelweyo kwentwasahlobo ukuya ekuphatheni okumnandi. Nokuba uthengela abantu obathandayo okanye ukulungele ukuya kwi-DIY epheleleyo kulo nyaka, ezi zimvo zesipho sePasika uzigubungele.
Imidlalo emnandi yePasika yasemva kweYadini-Eyona midlalo iqhelekileyo yangaphandle ngeCawa yaBantwana neentsapho eziBhiyozela eKhaya
Yonke le midlalo yoyilo ye-DIY yePasika ilungele abantwana kunye nabantu abadala ngokufanayo kumbhiyozo walo nyaka.
Iingcamango ezingama-24 eziPhambili zePasika zokuHamba ii-Iqanda-Ukuzonwabisa ngePasika yamaqanda aBantu aBadala naBantwana
Ezi zimvo zokuzingela amaqanda ngePasika ziya kwenza ukuzingela okungcono okwangoku. Ukusuka ekuzingeleni amaqanda ngee-smartphones ukuya kwiindlela zebunny, wonke umntu uya kulonwabela eli siko limnandi lePasika.
Imisebenzi emihle ye-Easter yokwenza ngo-2021 - I-DIY Easter Craft Ideas
Ezi ngcamango ze-DIY ze-Easter ezilula ziza kuzisa intwasahlobo kuyo nayiphi na indawo endlwini kwaye kulula ukuyila.
Izithsaba zasentwasahlobo ezingama-35 -Iipasika kunye neMihlobiso yoMnyango weNtwasahlobo
Ezi ntyatyambo zikhulu zentwasahlobo ziya kuhlaziya umnyango wakho wangaphambili. Yilungiselele i-Ista kunye nexesha lasentwasahlobo ngezi zimvo zintle zembali, kubandakanya ukhetho onokuluthenga kunye ne-DIY.
Iindlela ezingama-30 zoBuchule zokuDaya amaqanda e-Ista-Imibono eDayi yePeyinti eDayi
Ukudaya amaqanda e-Ista kuzakufumana ukupholisa okuninzi. Ukuba uyabuthanda ubugcisa kunye nobugcisa, ukubamba, okanye ufuna nje iprojekthi yokugcina usapho lonwabile kangangeeyure, jonga ezi mbono zeqanda ze-DIY ze-DIY.
Amanqaku anomdla malunga nePasika- I-Trivia malunga nePasika
Zonke ezi zinto zinomdla awuzange wazi ngePasika.
Iibhasikithi ezili-12 ezenzelwe wena zePasika- Iibhaskithi eziMonogrammed kunye namaBhakethi ngePasika
Nokuba ubeka iitoni zokuphatha ngaphakathi okanye uzisebenzisela ukuzingela amaqanda, yinxalenye yolonwabo lokonwabisa abantwana ngePasika ekukhetheni ibhasikiti yePasika abaya kuyithanda. Kwaye ukuba awukwazi ukumelana ne-monogram elungileyo, uya kuzithanda ezi bhasikiti zibhalwe igama lomntu-nokuba kungoku-DIY kunye nokuthenga-onokuzisebenzisa unyaka nonyaka.
I-55 yeeIqanda ezihombise ngeePasika eziGqwesileyo- I-Ideas yoyilo lweqanda lePasika
Ngaba ujonge ukuphefumlelwa kweqanda ngePasika? Siqokelele iitoni zoyilo lweqanda lePasika yoyilo lokuzingela kwamaqanda eIsta. Ukusuka kumaqanda e-galaxy ukuya kumaqanda e-cactus ukuya kumaqanda e-ice cream, usapho lwakho luya kuthanda ukudala la maqanda e-Ista awodwa kunye.
Iintyatyambo ezingama-30 ezintle zeNtwasahlobo-Iingcebiso zoCwangciso lweNtyatyambo
Igadi yakho ayisiyiyo kuphela indawo yeentyatyambo zentwasahlobo ekufuneka ikhule kakuhle. Ukuba ulungele ukugxotha ubusika kunye nokungenisa intwasahlobo, ezi zimvo zilungelelanisa ikhaya lakho ziya kuhlala zicocekile lonke ixesha langaphakathi nangaphandle, nokuba ukhetha ihydrangeas kunye neetulip okanye ukha nje iintyatyambo zasendle kunye nohlaza.
Iingcamango ezingama-25 zePasika zebhasikithi- Iibhasikithi ezintle zeBhasikithi yaBantwana kunye naBantu abaDala
Nokuba ujonga ibhasikiti efanelekileyo yePasika ukuyithenga okanye i-DIY, ezi zimvo zebhasikiti ze-Ista-ezisebenzela abantwana kunye nabantu abadala-zihlaziyiwe zizonke.
Amalungiselelo eNtyatyambo amaPasika ama-17-iZona zixhobo ziPhambili zeentyatyambo zePasika
Yamkela intwasahlobo ngale mibala imibalabala kunye neentyatyambo zeetulips, amaqanda, iinyibiba, nokunye okuninzi. Nazi iindlela ezintle zeentyatyambo zePasika eziza kuyimisa itafile yakho yeholide.
Izidlo ezilula ezingama-25 zePasika - Iiresiphi ezilungileyo zePasika
Yenza ubugcisa kunye neepasika zakho zecala kulo nyaka ngokuzama enye yeendlela zokupheka ezimnandi.
Iingcamango ezi-25 eziPhambili zeKhekhe lePasika-Indlela yokuHombisa ikhekhe elihle lePasika
Ezi iikeyiki ezintle zePasika zilungele i-brunch yePasika okanye isidlo sangokuhlwa.
Ama-40 amaNqaku aPhambili ePasika- iiNtetho ezintle nezikhuthazayo malunga neNtwasahlobo
Bhiyozela ukuqala kwentwasahlobo kunye neCawa yePasika ngezi zicatshulwa zinethemba kunye nezikhuthazayo.
23 Iimbono zekhekhe ezilula zePasika-Ezona mpepha zintle zePasika
Ezi khekhe zintle zilungele iPasika okanye nawuphi na umsitho wasentwasahlobo. Bhiyozela ixesha lonyaka kunye nee-pastel hues kunye neelekese ezineswekile.
Iiresiphi ezingama-30 ezilula ze-Egg- Eyona ndlela ibalaseleyo yokutya isidlo sakusasa kunye neDinner ngamaqanda
Amaqanda sesona sithako sityebileyo ekhitshini lakho - enkulu kusasa exakekileyo, isidlo sakusasa-isidlo sangokuhlwa okanye isitya seenkwenkwezi kwitafile yakho yebrunch.
Iingcamango ezingama-40 ezilula zeDessert zeDisert- Iidizethi ezintle zePasika, Ukuphatha kunye neelekese
Ukusuka kwi-cinnamon buns eyongezelelweyo enkulu, eswekile ukuya eVictoria ikeyiki yesiponji ene limoncello kunye namaqunube ebhalsamic (zama ukutsho ngokukhawuleza oku-3), ezi dessert zilula nezintle zePasika zilungele ukubhiyozela yonke imini.
Iingcamango ezingama-25 ze-Easter Brunch - Iiresiphi eziPhambili ze-Easter Brunch
Ncedisa enye yeendlela zokupheka ezimnandi kwi-Easter brunch.
Iikhadi ezili-15 zePasika ezimnandi zika-2018 -Imibono ehlekisayo yeKhadi lePasika kuwo wonke umntu
Nokuba uphelele kwimibhinqo ehlekisayo, okanye ufuna ukubonisa abantwana ngeyona Cawa ibalaseleyo, kukho ikhadi le-Ista elilungele wena.
I-mosaic tile backsplash izimvo zasekhitshini
izimvo zokulungisa iikhitshi ezincinci
Izimvo zangaphandle zekrisimesi zokuhombisa